नेपालमा मलाई कसैले 'भाडा माझ्ने' र 'ट्वाइलेट सफा' गर्ने रोजगारी दिनसक्छौ ? - Himalayan Kangaroo
नेपालमा मलाई कसैले ‘भाडा माझ्ने’ र ‘ट्वाइलेट सफा’ गर्ने रोजगारी दिनसक्छौ ?
Posted by Himalayan Kangaroo | ११ जेष्ठ २०७३, मंगलवार ०६:४२ |
विदेश जानु केही नेपालीहरुका लागि रहर भए पनि धेरैका लागि बाध्यता बनेको छ । त्यसैले कोही उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि त कोही रोजगारीका लागि जापान,अमेरिका,अष्ट्रेलिया,युके र खाँडी मुलुकहरुमा गएका छन् । यो क्रम अझैसम्म रोकिएको छैन । अहिले पनि दैनिक सयौं नेपालीहरु नेपाल छोडेर ती देशहरुमा जाने क्रम रोकिएको छैन । उनीहरुले पठाउँने रेमिट्यान्सले नेपालको बजेटमै ठूलो हिस्सा ओगट्दै आएको छ ।
तर त्यसरी जाने नेपालीहरुलाई आलोचना गर्ने र खिसीट्युरी गरेर उडाउँनेहरु पनि धेरै छन् । नेपालमा गरेर खान नसक्नेहरु,विदेशमा भाडा माझेर र ट्वाइलेट सफा गरेर फूर्ति लगाउँनेहरु भनेर विदशिएका नेपालीहरुलाई हेप्ने प्रवृत्ति पनि नेपाली समाजमा यथावत छ । यसबाट विदेशी भूमीमा पसेर संघर्षरत स्वाभिमानी नेपालीहरुको मन दुख्नु स्वभाविकै हो ।
त्यसैले अष्ट्रेलियामा रहेका एक नेपाली युवकले विदेशमा भाडा माझेर र ट्वाइलेट सफा गरेर पैसा कमाउँनेहरु भनेर हेप्ने प्रवृत्तिप्रति खुला चुनौति दिएका छन् । उनी हुन् अजय गिरी । अति भएपछि उनले एउटा पर्सनल भिडियो बनाउँदै आफ्ना चुनौतिपूर्ण अभिव्यक्ति फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।
भिडियोमा उनले भाडा माझ्न र शौचालय सफा गर्न विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीलाई हिनताबोध नहुने प्रष्ट पारेका छन् । उनले भनेका छन्–त्यसरी काम गरे वापत राम्रो पारिश्रमिक प्राप्त हुन्छ,जुन आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्न आवश्यक छ । यदि विदेशमा पाए जति पारिश्रमिक नेपालमा पनि पाइने हो भने विदेशमा मात्र होइन नेपालमै पनि भाडा माझ्न र शौचालय सफा गरेर बस्न आफूलाई कुनै लज्जाबोध नुहने गिरीले भिडियोमा उल्लेख गरेका छन् । उनी भन्छन्–त्यस्तो काम गरे वापत यहाँ अष्ट्रेलियामा थौरैमा पनि प्रतिघण्टा १५ सय रुपैयाँ पाइन्छ । म यहाँ एक सिफ्टमा ३ घण्टा काम गर्छु । अर्थात दिनमा एक सिफ्ट काम गरेर म ४५ सय रुपैयाँ पाउँछु । त्यति नै पैसा नेपालमा कसैले दिनसक्छ भने उसको भाडा माझ्नेदेखि ट्वाइलेट सफा गर्नेसम्मको काम गर्न तयार रहेको चुनौति दिएका छन् । नेपालको अर्वपति विनोद चौधरीसम्मलाई गिरीले त्यति तलब दिनसक्ने क्षमता छ ? भन्ने चुनौति दिएका छन् । यदि सक्नेभए आफू आजै अष्ट्रेलियाको भिसा रद्द गरेर आउँन तयार रहेको उनले भनेका छन् ।
रहरले कोही पनि आफ्नो परिवार,घर र देश छोडेर टाढा जान चाहँदैन । सबैको आ आफ्नो बाध्यता हुन्छन् । त्यही बाध्यता र केही आवश्यकताले खाँडीको मरुभूमिमा ६० डिग्रीको तापक्रममा पसीना वगाएर जम्मा पारेको रेमिट्यान्सले देशकै अर्थतन्त्र धानेको उनको दाबी छ । एउटा उदाहरण दिदै उनले भनेका छन्–अस्ति भर्खरै भारतले ३ महिना नाकाबन्दी गर्यो । तर देश ढकमकाएन । महँगी र कालोबजारीले आकाश छुँदा पनि देश चलिरह्यो । त्यो सबै हामी जस्ताले विदेशमा श्रम गरेर पठाइदिएको रेमिट्यान्सले हो ।
यी तीतो यथार्थलाई भुलेर फेसबुकका वालहरुमा विदेशिएका नेपालीहरुलाई होच्याउँने र अपमानित गर्ने खालका स्टाटस लेख्नेहरुलाई जवाफ दिन आफूले उक्त भिडियो बनाउनपरेको पनि अजयले भिडियोको अन्त्यमा उल्लेख गरेका छन् ।
Previousके नेपाली नारीको मूल्य गाईको जति पनि छैन ?
Nextलघु कथा : विक्रम सम्वत २१०० सालमा काठमाडौं
अष्ट्रेलियाको भिक्टोरियामा प्रहरी स्टेशन अगाडी छुरा प्रहार
१ बैशाख २०७४, शुक्रबार १५:१८
‘हिमालयन साँझ’को मुल उदेश्य खेलाडीको सम्मान गर्नु हो : सन्तोष बास्ताकोटी
२९ श्रावण २०७३, शनिबार ०४:१९
नेपाली भिसा आवेदकलाई नेपालबाटै अष्ट्रेलियाको भिसा दिन माग
२४ मंसिर २०७२, बिहीबार १०:४०
२६ मंसिर २०७५, बुधबार ०४:५८